Wonderful Bama King and his Mayor donated Masjids in Mandalay | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Mr. Azly Rahman’s “Dismantle our apartheid education”
Daw Suu’s beautiful picture »
Wonderful Bama King and his Mayor donated Masjids in Mandalay
Dr. Htet Minlwin said: တကယ်တော်တဲ့တိုက်အုပ်ဆရာတော်ပါလား။ ဦးတင်ပါသည်။
I agree with him and wrote this: Dr. Htet Minlwin, you would be surprized and praise that ကျောင်းတကာ မန္တလေးရွှေမြို့တော်ဝန် မင်းကြီးမဟာ မင်းခေါင်နော်ရထာ ရွှေလှံဗိုလ်ကောလင်းမြို့စားမင်း…because I heard that like his boss, King Mindon, who donated dozens of Masjids, he had also donatedaMasjid for his Muslim soldiers and captains. Wonderful Bamas. TQ for all these understandings.
Dr. Htet Minlwin replied: Saya U Ko Ko Gyi, as you know The King Asoka once said “If you denounce others’ religion you are denounce yours in some way.” It’s been an undeniable truth. Concord is good and Unity is strength. I am really happy to live peacefully and with mutual understanding with my muslim friends, christian friends and… It’s in essenceacolorful rainbow. A Wonder! Thanks saya.
These comments are the responses after reading this upload by my No. 5th. brother Mg Mg :ဘုန်းဘုန်းရဲ့ ကျောင်းတကာဆိုပေမဲ့ မန္တလေးရဲ့ မြို့တော်ဝန်လဲဖြစ်တယ်လေ။ စာရေးဆရာမကြီးယုဝတီခင်စိန်လှိုင်ရဲ့အဖိုးတော်မှာပေါ့၊
ဘုန်းဘုန်းရဲ့ ကျောင်းတကာဆိုပေမဲ့ မန္တလေးရဲ့ မြို့တော်ဝန်လဲဖြစ် တယ်လေ။ စာရေးဆရာမကြီး ယုဝတီခင်စိန်လှိုင်ရဲ့အဖိုးတော်မှာ ပေါ့၊ မန္တလေးရွှေမြို့တော်ဝန် မင်းကြီး မဟာမင်းခေါင်နော်ရထာ ရွှေလှံဗိုလ်ကောလင်းမြို့စားမင်း၏ ပြိုပျက်နေသော အုဋ်ဂူပြသသ်ကို ပြသရင်းဆရာတော်က မိန့်ကြားခဲ့ သည်။
လူနေအိမ်တွေကြားမှာ အကာအရံတွေပြိုပျက်လို့ အမှိုက် ကုန်းကြီးလိုဖြစ်နေတယ်၊အုဋ်ဂူ အပေါ်မှာက သနပ်ပင်ကြီးပေါက် နေတော့ အက်ကွဲနေတာ မိုးတမိုး လောက်ကောင်းကောင်း ရွာလိုက် ရင် ပြိုမှာသေချာတယ်၊ဘုန်းကြီး ပြင်ဘို့ဆိုတာက သိန်း၇၀၊၈၀၊ ဘုန်းကြီးလည်း မတတ်နိုင်ဘူး၊
တတ်နိုင်ဉီးတော့ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ်ပြင်လို့ ရှေးဟောင်းလက်ရာ အမွေအနှစ်တွေ ပျက်စီး ကုန်မှာစိုး ရသေးတယ်။ တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ သိရှိသွားအောင် တကာတို့ကကူ ညီသတင်းပို့ပေးကြ။
ဘုန်းဘုန်းတို့ လောကုတ္တရာသမားတွေရဲ့အလုပ် မဟုတ်ဘူး။
အမျိုး၊ဘာသာ၊သာ သနာ ကို ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ချင်တယ်ဆိုရင် သမိုင်းအမွေအနှစ် တွေကိုလည်း ဖေါ်ထုတ်ကြ၊ထိမ်း သိမ်းကြ လို့ မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ အောင်မြေသာစံ ရပ်ကွက်၊အကွက်အမှတ် ၁၃၅ ရှိ ရွှေလှံကျောင်း တိုက်အုပ်ဆရာတော် ဘန္ဒန္တ ဉီးတျေဇနိယ မှမိန့်ကြားသည်။
By: Maungmaung Skw
ြ ပုပြင်ထိန်းသိမ်းမည့်သူမရှိ ပျက်ဆီးခြင်းမလှ ပျက်ဆီးနေသော မန္တလေးမြို့တော်ဝန်ဟောင်း ရွှေလှံဗိုလ် ကောလင်းမြို့စားမင်း မင်းကြီး မဟာ မင်းခေါင် နော်ရထာ၏ သင်းချိုင်း အား ၁၇့၃့၂၀၁၂ရက်နေ့ ကတွေ့ရစဉ်။
မန္တလေးရွှေမြို့တော်ဝန် ရွှေလှံဗိုလ် ကောလင်း မြို့စားမင်း မင်းကြီးမဟာမင်းခေါင်နော်ရထာ ၁၂၀၅ခုဘွား ၊ နံစနေ ၊ အသက်ခုနစ်ဆယ်။ ၁၂၇၄ခု တပေါင်းလ္ဆန်း၁၀ရက်နေ့ ဘဝပြောင်းသည်။
Maungmaung Skw အပေါင်းအသင်းတွေစုပြီး ရွှေလှံ ဘုန်း တော်ကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာ စတုဒီသာ ထမင်း၊ဘူးသီးနဲ့ကြက်သားသပြွန်းဟင်း၊ ငပိနဲ့ပုစွန်ခြောက်ချက်၊ပဲပြုတ်၊သရက် ချဉ်သုတ်နဲ့ ရပ်ကွက်ကိုကျွေးတာ ဆန် တတင်းကုန်တယ်။ရွှေလှံကျောင်းဆရာ တော်ဉီးစီးတာ။
TQ Mg Mg for the good deed, donation which isaRenaissance and reciprocal to the original donor ရွှေလှံဗိုလ် ‘s spirit of cross donation beyound the religious divide.
Tags: Htet Minlwin, Islam, Masjid, Mosque, Muslim
This entry was posted on March 18, 2012 at 12:47 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
3 Responses to “Wonderful Bama King and his Mayor donated Masjids in Mandalay”
March 21, 2012 at 3:31 am | Reply
Ko Ko Gyi wrote: Congratulations Haji U Mg Mg and Myanmar authorities for reporting and fast action. Maungmaung Skw
မန္တလေးမြို့တော်ဝန် ရွှေလှံဗိုလ် အုတ်ဂူ ထိမ်းသိမ်းရေး စပြီ။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းမှု မရှိသဖြင့် ပျက်ဆီးယိုယွင်းနေ
သော မန္တလေးမြို့တော်ဝန် ရွှေလှံ ဗိုလ်၏ အုတ်ဂူကို ရှေးဟောင်း
သုတေသနရုံးမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဉီးမြင့်ဇော်၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ပြုပြင်
ထိမ်းသိမ်းမှုများ စတင်ဆောင်ရွက် နေပြီဖြစ်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူရှေး
ဟောင်းသုတေသနရုံးမှ ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်နေသော အရာရှိတဉီး
ကပြောကြားခဲ့သည်။အဆိုပါ အရာ ရှိမှ မိမိတို့အနေဖြင့် ယဉ်ကျေးမှု
ဆိုင်ရာ အမွေအနှစ်များကို ရှေးမူ မပျက် ထိမ်းသိမ်းစောင့်ရှောက်
လျက်ရှိပါကြောင်း၊လက်ရှိအြေ​ခ အနေအရူဉီးရေထူထပ်လာသည့်အတွက်
လူနေအိမ်ခြေများနှင့်နီးစပ်​မှုရှိနေ သော သမိုင်းဝင်နေရာများ တဖြည်း
ဖြည်း လူနေအိမ်များကြားရောက် ကုန်သဖြင့် တိမ်မြုတ်ပျောက်ကွယ်
သလိုဖြစ်ရကြောင်း၊မိမိတို့ဌာန အနေနှင့် သိရှိပါက မဆိုင်းမတွ
သော ရှေးဟောင်းပစ္စည်း အဆောက်အအုံ များကိုသိမြင်
တွေ့ရှိခဲ့ပါက မိမိတို့၏ရှေးဟောင်း သုတေသနဌာန ဖုန်းနံပါတ် ၀၂
၇၆၁၅၂ သို့ ဆက်သွယ်အကြောင်း ကြားပေးစေလိုကြောင်း၊မိမိတို့
ဌာနက အမြန်ဆုံးအရေးယူဆောင် ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း ပြောကြား
သွားပါသည်။ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းခွင်သို့ ရွှေလှံကျောင်းတိုက်
တိုက်အုပ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ ဉီးတေဇနိယ ကိုယ်တိုင်ကြွရောက်
ကြည့်ရှုပြီး လိုအပ်သောအကူအ ညီများ ပေးအပ်သွားကြောင်း သိရှိ
March 23, 2012 at 1:37 pm | Reply
ေ၇ွှနားကွပ်တဲ့ တိမ်ဂွမ်းစိုင် (စာရေးဆရာမကြီးယုဝတီခင်စိန်လှိုင်)
“The cloud with the golden linen” I took this beautiful phrase from the title of the fiction book written byavery famous Burmese author, Yu Wady Khin Sein Hlaing.
Wonderful Bama King and his Mayor donated Masjids in Mandalay « lumyochit Says:
May 15, 2012 at 11:41 am | Reply
[…] Read the rest of this entry » Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Tags: Articles […]